China, Gunyana 9, 2021 China, Gunyana 9, 2021 Rebecca Clyde
AI chatbots inogona kuvhura musuwo kune zvirinani dhijitari zviitiko uye nekuwedzera kushandurwa kwevatengi. Asi ivo vanogona zvakare tank yako yevatengi ruzivo. Heano maitiro ekuzviita nenzira kwayo. Vatengi vanhasi vanotarisira kuti mabhizimusi aendese ruzivo rwega uye rwekuda kwemaawa makumi maviri nemana pazuva, mazuva manomwe pavhiki, mazuva makumi matatu nemazana matatu egore. Makambani mune ese maindasitiri anoda kuwedzera maitiro avo kuitira kuti ape vatengi kudzora kwavanotsvaga uye kushandura kuwanda kwe
Kubuda: Wedzera Zvako Zvemukati Kushambadzira ROI ine Inopindirana Zvemukati
Chishanu, May 14, 2021 Chishanu, May 14, 2021 Douglas Karr
Pane podcast ichangoburwa naMarcus Sheridan, akataura nezve matekiniki ayo mabhizinesi ari kushaya chiratidzo paanenge achigadzira yavo yekushambadzira yedhijitari. Iwe unogona kuteerera kune iyo yese episode pano: Imwe kiyi iyo yaakataura nayo sevatengi nemabhizinesi vachiramba vachizvitungamira-kwavo kwavo kwevatengi nzendo ndiko kudyidzana zvemukati. Marcus akataura mhando nhatu dzezvinhu zvinofambidzana zvinobvumidza iyo yega-kutungamira: Kuzvirongedza - kugona kwetarisiro yekumisikidza
Freshchat: Yakabatana, mitauro yakawanda, Yakabatanidzwa Chat Uye Chatbot Yako Saiti
Chitatu, October 7, 2020 Chitatu, October 7, 2020 Douglas Karr
Kunyangwe iwe uri kutyaira kunotungamira kune yako saiti, vanobata vatengi, kana kupa vatengi rutsigiro… yavo inotarisira mazuva ano kuti webhusaiti yega yega ine yakasangana yekugona kugona. Nepo izvi zvichinzwika zviri nyore, pane zvakawanda zvakaoma nekutaurirana… kubva mukushandisa iyo chat, kushivirira spam, auto-kupindura, kudhiraivha ... zvinogona kunyanyisa musoro. Mazhinji mapuratifomu ehurukuro ari nyore… kungo taura chete pakati peboka rako rekutsigira uye mushanyi kune yako saiti. Izvo zvinosiya hombe
China, August 27, 2020 China, Gunyana 17, 2020 Vivek Sriram